नेपालगन्जमा ड्रागन फ्रुटको बजार खोज्दै पूर्वमन्त्री विष्ट, सोधे- तयार भयो कति चाहिन्छ ? - Arthapage
नेपालगन्जमा ड्रागन फ्रुटको बजार खोज्दै पूर्वमन्त्री विष्ट, सोधे- तयार भयो कति चाहिन्छ ?
प्रकाशित मितिः ५ श्रावण २०७७, सोमबार १९:३८ July 20, 2020
नेपालगन्ज ५ साउन : पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टमगरले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ मा ड्रागनखेती गरेका छन् । यतिबेला ड्रागन फल फलेको छ । सामाजिक सन्जालमा उक्त फलेको फल देखाउँदै मगरले नेपालगन्जमा कति चाहिन्छ भन्दै सोधेका छन् ।
के तपाई यो खान तयार हुनुहुन्छ ।
पूर्वमन्त्री मगरले लगाएको ड्रागनको बजार नेपालगन्ज, काठमाण्डौं, पोखरा, बुटवल जस्ता ठूला शहरहरु हुन । नेपालगन्जमा भाटभटेनी सुपरमार्केट बाहेक व्यक्तिहरुले समेत ड्रागन फ्रुट खरिद गरेर ल्याउने गरेका छन् ।
राससका अनुसार, दाङमा अहिले आफूले ६६ कट्ठामा ड्रागन फ्रुटखेती गरेको भन्दै केही अनुसन्धानकर्ताले नेपालमा यो नै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा गरिएको खेती भएको बताउने गरेको मगरले जानकारी दिए।
विदेशी ड्रागन फ्रुट प्रतिकेजी ७०० देखि १९ सय रुपैयाँसम्म किनबेच हुने गर्छ।
आफू मन्त्री हुँदा चीन गएको बेला उनले ड्रागन फ्रुट खाने अवसर पाएपछि यसबारेमा चासो लिएका थिए। पूर्वमन्त्री मगरले भने, ‘त्यतिबेला यो फललाई नेपालमा उत्पादन गरे कस्तो हुन्छ होला भन्ने सोच बनाएको थिएँ।’
धेरै वर्षदेखि बाँझो जग्गालाई ‘फिलिङ’ गरेर साढे दुई फिट गहिरो पिल्लर गाडिएको र दुई मिटरको दूरीमा बिरुवा रोपिएको छ। त्यही डिप बोरिङ बनाएर हप्तामा दुईरतीन पटक सिँचाइ गर्ने गरिएको छ।
यसको फूल रातमा मात्रै फुल्ने र रातमा मात्रै फल लाग्ने भएकाले रातकी रानी भन्ने गरिन्छ। यसमा जेठको १५ देखि कात्तिकको १५ गतेसम्म फुलेर फल लाग्छ। फूल फुलेको चाररपाँच दिनपछि फूलका पात सुकिसक्ने र सुकेको फूलको चिया बन्ने उनको भनाइ छ।
फूल फुलेको ४५ दिनमा फल तयार हुने र त्यो १५० ग्रामदेखि एक किलोसम्मको हुन्छ। राम्रो सिँचाइ, मल तथा स्याहारसुसार पाएमा २० देखि ३० वर्षसम्म फल दिन्छ।
गर्मी ठाउँमा खेती गर्न सकिने यसमा १२ प्रकारका खनिज तथा भिटामिन पाइन्छ। जस्तोसुकै माटोमा गमला, छत तथा करेसामा लगाउन सकिन्छ। फल खाँदा मीठो नभए पनि औषधि गुणले भरिपूर्ण रहेको छ।
प्रकाशित मितिः ५ श्रावण २०७७, सोमबार १९:३८ |
Prevयसरी लिन सकिन्छ एक्जिम कोड अनलाई सेवा
Nextपारिजात बगान व्यवस्थापन समिति गठन